Kaararka ganacsiga asalka ah | Hal-abuurka Online
Yaa sheegay in kaararkii ganacsiga ee asalka ahaa ay meesha ka baxeen? Waa run in Isbaanishka bixinta kaadhka ganacsiga ay tahay wax la yaab leh, iyo in marar badan ay ku qabato adiga oo aan garanayn waxa la yiraahdo ama sida loo dhaqmo wakhtigaas. Laakiin meelaha kale waxay ku noqotaa borotokool. Tusaale ahaan, Japan, marka kaadhka lagu siiyo, waa inaad waydiisaa su'aal ku saabsan macluumaadka ku yaal. Haddii kale, waxaa loo arkaa fal dhadhan xun.
Hadda, waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo kaararka ganacsiga; Mararka qaarkoodna helitaanka nashqada saxda ah waxay qaadataa waqti. Laakiin natiijada ugu dambeysa waa u qalantaa. Sidaa darteed, hoos waxaan rabnaa in aan ku siin fikradaha qaar si loo sameeyo kaararka ganacsiga asalka ah.
1 Waa maxay sababta sharad on kaararka ganacsiga asalka ah
2 Fikradaha lagu abuurayo kaararka ganacsiga asalka ah
2.1 Kaararka ganacsiga asalka ah iyo kuwa dhimanaya
2.2 Kaararka leh kiis qalin qalin ah
2.3 3D kaararka ganacsiga
2.4 Kaararka ganacsiga asalka ah - beddelka qaabka
3 Tusaalooyinka kaararka ganacsiga hal-abuurka leh
3.1 Kaarka furiinka qosolka leh
3.2 Kaadhka Xirfadlayaasha Yoga
3.3 Ku habboon dhakhtarka ilkaha
Waa maxay sababta sharad on kaararka ganacsiga asalka ah
Ka fikir in yar sida aad uga falcelin doonto haddii qof ku siiyo kaadhka ganacsiga caadiga ah, oo wata magaca, ciwaanka iyo lambarka taleefanka. Waad qaadan lahayd, waxaad raadin lahayd dhowr ilbiriqsi waana taas. Shaqadeeda ma qabsanayso ilaa aad runtii uga baahan tahay, sax?
Hadda, ka soo qaad inay ku siinayaan kaar leh naqshad madadaalo leh, tusaale ahaan in magaca shirkadu uu yahay mid toosan, ama inay sidoo kale tahay xarafka ugu horreeya ee xog kasta oo macluumaad ah oo ay rabaan inay ku dhejiyaan kaarka. Maxay ku soo jiidan lahayd dareenkaaga oo aad u eegi lahayd?
Waa hagaag taasi waa sababta kaararka ganacsiga asalka ah ay aad uga fiican yihiin kuwa caadiga ah; sababtoo ah Waxaad heli doontaa dareenka qofka aad siiso, laakiin markaad xasuusiso kaarkaas, waxaad sidoo kale heli doontaa inay ka hadlaan adiga, tus kaadhkaaga; Rumayso ama ha rumaysan, xusuusta sawireed ee dad badani haystaan ​​waxay ka dhigi doontaa inay xusuustaan ​​kaarkaagu sida uu ahaa inay ku raadiyaan haddii ay u baahan yihiin adeegyadaada. Laakiin, tan, waxaad u baahan tahay inaad abuurto kaar ganacsi oo asal ah oo wanaagsan kaasoo ku habboon ganacsigaaga iyo shirkaddaada. Ma taqaan sida loo sameeyo?
Fikradaha lagu abuurayo kaararka ganacsiga asalka ah
Sida aan ognahay in hal-abuurka iyo asalka ahi ay mararka qaarkood nagu qiimeeyaan, halkan waxaa ah fikrado iyo fureyaal aad ku dhejin karto ficil markaad abuureyso kaadhka ganacsiga asalka ah. Macnaheedu maaha inaad isticmaasho, wax walba, laakiin waxay la macno tahay inaad eegto fursadaha aad u baahan tahay, si uun, uga bax ganacsiga sida caadiga ah.
Kaararka ganacsiga asalka ah iyo kuwa dhimanaya
Hadda kaadhadhka ganacsi ee dhimman ayaa la qaataa, taas oo ah, waa la kala qaybiyaa ama loo dhigaa siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, mid ka mid ah halka ay ka gooyeen silhouette-kaaga, ama astaanta shirkaddaada, si ay ugu isticmaalaan qurxinta (haddii ay jecel yihiin, dabcan). Tusaale ahaan, waad awoodi kartaa Ka fiirso inaad ku sameyso rugta caafimaadka xoolaha, halkaasoo silhouettes ay xayawaan ahaayeen.
Ikhtiyaarka kale ayaa ah in la siiyo kaarka sidii uu yahay halxiraale yar, oo la kala furfuray, si ay ugu huraan dhowr ilbiriqsi si ay u abuuraan oo ay sidaas u helaan macluumaadka. Sidan ayaad naftaada uga dhigaysaa wax ka xiiso badan.
Kaararka leh kiis qalin qalin ah
Ma qiyaasi kartaa kaadh kiis lahaa? Hagaag, taasi waa waxa aan kuu soo jeedinayno. Waxay ku saabsan tahay gelinta kaadhka gudaha iyo samaynta dabool si aad u ilaaliso laakiin wax walbaa waxay u socdaan si waafaqsan ganacsigaaga.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay dukaanka rikoodhada, maxaad u diidaysaa kaar u eg rikoodh oo aad ka soo qaadato vinyl si aad ugu dhejiso rikoodhada? Asalka waa.
Doorasho kale waa u dhig kaadhka si, gacan-gacanta, ay tusto sawir, markaad ka saartona, sawirku wuu isbedelaa.
3D kaararka ganacsiga
In ka badan 3D, waa in ay leeyihiin qayb ka mid ah taas waa la taaban karaa, yeelan karaa texture iyo in ay u socoto sida ganacsigaaga. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay bakhaar buste ah iyo bakhaar, waxaad ka dhigi kartaa qayb ka mid ah kaadhka inay lahaato suuf jilicsan, sida dhogorta dhogorta, ama roogaga qoto dheer.
Kaararka ganacsiga asalka ah - beddelka qaabka
Ha joogin oo keliya leydiyada (hore ama toosan), sharad hadda isbeddelada. Isku day kaadhadh labajibbaaran, wareeg ah, dheeman u samaysan ama wax kasta oo aad ka fikiri karto. Xitaa waxaad koobi kartaa qaabka shay sifo u ah shirkaddaada (tusaale ahaan, haddii aad leedahay khudaar cagaaran, dooro midho la hayo sanadka oo dhan).
Guud ahaan, furayaasha dhismaha kaadhadhka ganacsiga asalka ah maanta waxay ku jiraan:
Isticmaal qaabab hal abuur leh ama silhouettes.
Isticmaal sawiro tayo leh oo soo jiidanaya dareenka.
Qoraal ugu yar, kaliya xogta ugu muhiimsan.
Is-dhexgal ama xaqiiqo la kordhiyay (waxay noqon doonaan mustaqbalka, markaa taas maskaxda ku hay).
Chords oo leh shirkaddaada (midab leh, oo la xidhiidha shaqada aad qabato, iwm.).
Tusaalooyinka kaararka ganacsiga hal-abuurka leh
Kahor intaanan dhammayn, waxaan jeclaan lahayn inaan kuu dhaafno xoogaa tusaalooyin kaararka ganacsiga asalka ah taas, sababtoo ah sida loo abuuray, soo jiidashada dareenka. Kuuma sheegayno inaad koobiyayso iyaga, sababtoo ah markaa ma sii ahaan doonaan "asalka". Laakiin waxay ku siin karaan fikrado cusub oo kaa dhigi doona inaad guulaysato.
Kaarka furiinka qosolka leh
Marka lammaanuhu rabaan furiinka, waxay u tagaan qareen, sax? Hagaag, kaarkan, oo uu sameeyay James AW Mahon, waxa uu sameeyaa waxa uu siinayaa kaadh la gooyn karo kala badh, sida furriinka lagu sameeyo, in labada qof ay kala tagaan.
Hadda, waxaan aragnaa qaladkaas Magaciisa sidoo kale waa jabay, marka taleefankiisa iyo iimaylkiisu aysan jirin. Markaa maskaxda ku hay haddii aad samaynayso naqshad sidan oo kale ah si magacu ugu jiro labadaba.
Kaadhka Xirfadlayaasha Yoga
Xigasho: Tic garaac
Waa maxay dabeecadda ugu badan ee samaynta yoga? Sariir hayso, sax? Bal qiyaas samaynta a kaadhka ganacsiga ee aad bixisay oo duuban oo u eg gogosha dhabta ah, kaliya in yar.
Tani waa dhab ahaan waxa ay ku sameeyeen shirkad yoga ah oo ku taal Vancouver. Oo ma odhan doontid ma aha hal-abuur.
Ku habboon dhakhtarka ilkaha
Xigasho: Tic Beat
Dhakhaatiirta ilkuhu waxay naga daaweeyaan godadka (marka lagu daro waxyaabo kale). Markaa haysashada kaadhka muujinaya ilig leh dalool ma aha fikrad xun. Laakin maaha mid hal abuur leh. Laakiin ka waran haddii kaarka ganacsigu uu gudaha ku jiro oo markaad jiidato, godadka godadka ay baaba'aan? Arrinku wuu is beddelaa.
Taasi waxay ahayd waxa ay Dr. Anita, oo samaysay naqshad ay qayb ka mid ah sawirka teleefanku na tusayso suuska ilkaha oo meesha ka baxa.
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay kaararka ganacsiga asalka ah, laakiin waxa muhiimka ah ayaa ah inay ka kooban yihiin labadaba waxaad qabato iyo waxa ay dadku la xiriiraan shirkaddaada. Marka aad si cad u hesho, waa inaad ku ciyaarto oo kaliya (oo raadso shirkad daabacan oo ka dhigi karta inay dhacdo).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Kaararka ganacsiga asalka ah